ပန်းတိုင် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ယောက်ျားလေးဖြစ်ပီး ဘာလို့ OG လုပ်မှာလဲ ? တဲ့ ...ပြောရမယ်ဆိုရင် တော်တော်လေးရှုပ်တယ် ...
အရှင်းဆုံး ပြောရရင်တော့ ဝါသနာပါလို့ပါ ပေါ့ ...အဲ့မေးခွန်းအတွက် အလေးထားပီး ဖြေရမယ်ဆိုရင် ~
ကိုယ် ဆေးကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကလေးအထူးကုဆရာဝန် (Paediatrician) ပေါ့ ...
Final Part2 ထိ ခိုင်မာခဲ့တယ် ...
ဒါပေမယ့် ကိုယ် House Surgeon စဆင်းတော့ OG Posting နဲ့ စတယ် ... ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံမှာ ...
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံလို့ပဲ ပြောရမလား?သူတို့နဲ့ ကိုယ် ရှေးဘဝရေစက်လို့ပဲ ပြောရမလား?
Prof တွေမှ အစတည်လို့ PG, AS အထိ အစ်မတွေအားလုံးရဲ့ ဂရုတစိုက်သင်ကြားပြသမှုကို
ကိုယ် ရခဲ့ရတယ် ... ကိုယ်က Unit1 အပိုင်မို့ Unit1ကအစ်မတွေကတော့ အထူးအနီးကပ် သင်ပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမယ့် တခြားUnitတွေက အစ်မတွေလဲ ကိုယ့်ကိုကြုံရင်ကြုံသလို သင်ပေးကြတယ် ...
တခါတလေ ကိုယ်တွေOncallမှာ တခြာuးnitကအကြီးတွေ Patient က Urgent တက်လာလို့ သူတို့လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို သေချာသင်ပေးတတ်ကြတယ် ...ကိုယ် ပျော်လာတယ် ... dutyဆင်းရမှာကို ပျော်နေခဲ့ရတယ် ...1st Posting မို့ အဲ့လိုတက်ကြွနေတာလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သံသယဝင်ခဲ့တယ် ...
ရောက်လေရာပျော်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိနေတော့ ဒီမှာ ပျော်လို့ OG ဖြစ်ချင်တာလို့ ကိုယ်ထင်ခဲ့တယ် ...
၃လ ၁ခါ posting ပြောင်းသွားသည့်တိုင် တနေ့တခြား ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခိုင်မာလာတယ် ...
ကိုယ်ဟာ ရောက်လေရာမှာ ပျော်တတ်သူပါ ... Posting ပြောင်းတိုင်းလဲ ရောက်ရာwardမှာ ကိုယ်ပျော်ဆဲပါ ...သို့သော် ~ ကိုယ်သည် Stress ဒဏ်ကို သေမလောက်ကြောက်တဲ့သူပါ ...
Risk တွေရဲ့ကြားမှာ ကိုယ်မရှင်သန်နိုင်ပါ ... 2nd Posting ကလေးဆေးရုံကြီးရောက်တဲ့အခါ
ကိုယ် Paediatrician Life ကို ကြောက်မိသွားတယ် ... risk တွေကြားမှာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ Paediatricianတွေကို ကိုယ်လေးစားမိတာတော့ အမှန်ပဲ ...ကိုယ်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူပီပီ
စိတ်မကောင်းလဲ ဖြစ်လွယ်တယ် ...ကလေးတွေ အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရတာမြင်ရင်
ကိုယ်အလိုလို ဝမ်းနည်းမိတယ် ...ကိုယ့်အတွက်တော့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် လမ်းကို Exclusive method နဲ့ပဲ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ် ...
အဲ့မှာ ၁ခုရှိတာက ကိုယ်ဟာ တခြား Speciality တွေကို အထိအတွေ့နည်းခဲ့ရတော့ ဝါသနာမပါတော့ပီ ...
ကိုယ့်ကိုပြောကြတယ် ... "" Talkyကောင်းတယ် .. GPလဲကောင်းတယ် ...Physician လုပ်ပေါ့ .. "" တဲ့ ...
Physician ၁ယောက်လုပ်ဖို့ အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးလေ ...Talkyကောင်းရုံ GPကောင်းရုံနဲ့ သမားတော်လုပ်လို့မရဘူး... Stepတွေ အရမ်းများတယ်... stressတွေ အရမ်းများတယ် ..
PG entrance အောင်ဖို့တောင် စာအင်မတန်ကျက်နိုင်မှ ...Specialist life , တခါ Consultant ဖြစ်တော့
ဘာ Doctorite ဖြေမှာလဲ ... စကားပြောလာပီ ...အဲ့ဒါတွေ ခဏထား ... ကိုယ့်လိုစာကျက်ပျင်းတဲ့သူအဖို့
PG life မှာတင် Stressသတ်လို့ ကိုယ်သေတယ် ...ယောက်ျားလေးဆိုတော့ Surgeon လုပ်ပါလား ? တဲ့ ...အဲ့လိုပြောခံရတဲ့အခါ ကိုယ်စဉ်းစားမိတယ် ...Surgeon ၁ယောက်ရဲ့ Stress ကို သူမသိရှာပါလားလို့ ...
Surgeon တွေဆိုတာ သူများတွေအမြင်မှာ ဟီးဟီးဟားဟား ပျော်လိုက်ပါးလိုက်လို့ သူတို့ထင်ကြတယ် ...
တကယ်တမ်း သူတို့ကသာ ဆရာဝန်တွေထဲမှာ Stress အများဆုံး လူသားတွေပါ ...သူတို့ Stress ကို ဖုံးဖိဖို့ လူတွေရှေ့မှာ သူတို့ မြူးတူးလွတ်လပ်ပျော်ပါး ပြနေကြတာ ...တကယ်တမ်းကျ riskရော Stress ရော
သူတို့ဆီမှာ အရမ်းများတယ် ...
သူတို့ဟာ ခွဲစိပ်ပညာကို အင်မတန်မှ ဝါသနာကြီးလွန်းလို့သာ အဲ့ stress တွေ အံတုရင်း ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်နေကြတာ ... သေချာသိချင်ရင်တော့ သူတို့ကို ကြုံတဲ့အခါမေးကြည့်ပါ...
ပြောရရင် ကိုယ်နဲ့တော့ မကိုက်တာ အမှန်ပဲ ...၁ဖက်က လှည့်စဉ်းစားရင်လဲ ...ကိုယ်ဝန်နဲ့မီးဖွားခြင်းဆိုတာ ယောက်ျားနဲ့ အတူနေလို့ ဖြစ်တည်လာတဲ လောကဓမ္မတာ၁ခုပဲ ...အဲ့ဓမ္မတာကို ကိုယ်က စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အခါ ကလေးရော အမေရော ကျန်းမာတဲ့အခါ သူတို့လဲပျော်ကြတယ် ...
ကိုယ်လဲ သူတို့ပျော်နေတာကိုကြည့်ပီး ပီတိဖြစ်ရတယ် ...ပြောရမယ်ဆိုရင် Golden Hand တွေပေါ့ ...
ဒါကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ သားဖွားခြင်းပေါ့ ... တခြား High Risk Patient တွေ maternal disease ရှိသူတွေ , တခါ B+, C+, R+ ၁ခုခုရှိသူတွေ တခါ Urgent ထိသွားသူတွေ , emergency case တွေ
Gynae problem တွေ ... ဒါတွေဟာလဲ stressပါပဲ ...ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ... အဲ့stressတွေကိုတော့ ကိုယ်ခံနိုင်နေတယ် ... အဲ့ဖက်အလေးသာနေလို့ပဲထင်တယ် ...ကိုယ့်စိတ်ကိုက အဲ့stressတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းချင်တယ် ...ကိုယ်ဟာ စာကျက်ရမှာ ပျင်းပေမယ့် Skillပိုင်းမှာတော့ သင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြပါတယ် ... AN visit လာတဲ့လူတွေကို AN care ပေးချင်တယ် ...
ဆရာဦးစိုးလွင်လို Health Education တွေ ပေးချင်တယ် ... CME တွေ ၁ပတ်၁ခါ လုပ်ချင်တယ် ...
နေ့စဉ် မီးမဖွားမီ အော်ဟစ်နေတဲ့လူနာတွေ မီးဖွားပီးတဲ့အခါ သူတို့ကလေးကို ကြည့်ပီး
ပြုံးပျော်နေတာကြည့်ရင်း ကိုယ်ပျော်ချင်တယ် ... "" No child is born to die "" တဲ့ ...
High riskဆိုတဲ့အရာကို မရှိခင်ကတည်းက ကိုယ်တားဆီးချင်တယ် ... ရှိလာခဲ့ရင်လဲ ကိုယ်အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်ပေးချင်တယ် ... MSc ရပီးတဲ့အခါ ကိုယ်teaching ဖက်ရောတွဲကိုင်ပီး
သားဖွားမီးယပ်ပညာကို အထင်သေးစိတ်ပျက်နေတဲ့ လူငယ်တချို့ရှေ့မှာ မမစန္ဒာဝင်းတို့ ဆရာဦးစိုးလွင်တို့လို ကလေးတွေ ပြုံးပျော်ရင်း သင်ယူချင်လာအောင်သင်ပေးချင်တယ် ...
လူနာဗဟိုပြု (Patient Centre) ရယ်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာUnderlying medical disease တွေ Surgical case တွေကို Physician တွေ Surgeon တွေကို မကျော်ပဲ
Chart show , Patient show တွေကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ ... Multidisciplinary Approach ပေါ့ ...
ကိုယ့်ကိုOGistဖြစ်ချင်လာအောင် တွန်းပို့နေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ စိတ်ရဲ့စွမ်းအား၁ခုလဲ ရှိတယ် ...
ဒါကတော့ Top Secret ပါ ... ဘယ်သူမေးမေးကိုယ်ဘယ်တော့မှ ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး ...
တခါတလေ ဆရာဝန်ချင်း ပြောတတ်ကြတယ် ...အောက်လမ်းဆရာတဲ့ ... အောက်ပိုင်းပဲ ကိုင်ရတာတဲ့ ...
ဒါလေးပဲ ကုရတာ ... ဒီနေရာလေးပဲ ခွဲရတာ ... တဲ့ ...ဆိုပေမယ့်လဲ .. ဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောကြတဲ့
Medicalရော Surgicalရော နှောယှက်နေတဲ့ OG Life လေးမှာပဲ ကိုယ်ပျော်မွေ့ပါရစေတော့ ...
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွပေမို့ နောင်အနာဂတ်မှာ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်ဂုဏ်ယူရင်း
လက်မထောင်ပီး ဖြတ်သန်းသွားလိုက်ပါ့မယ် ... ကိုယ် လူ့ဘဝထဲစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကိုယ့်ကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံမှာ သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်၁ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရရင်တော့
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ဆုလာဘ်ပါပဲ ... အရွယ်မရောက်ခင်က အဆွယ်ပေါက်ချင်တယ်ပဲ
ဆိုကြပါစေတော့ ... ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျတဲ့ ကိုယ့်လိုလူအဖို့ ကိုယ့်goalနဲ့ကိုယ် .. ကိုယ့်targetနဲ့ကိုယ် ထားပါရစေတော့...
I'm nothing now ...
I'm justanewly graduated SAMA holding Doctor ...
But , I must be an OG one day ...